आईपीएलको मध्य ट्रान्सफर सुरु हुदै, सन्दिप के गर्लान ?
ई-खेलकुद २०७७ असोज २६ , सोमबार ०५:१० मा प्रकाशित
एजेन्सी । ईण्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आईपीएलमा आज रातीबाट खेलाडी ट्रान्सफर सुरु हुदैछ । टोलीका खेलाडी एकअर्को क्लबमा ट्रान्सफरका लागि आज हुने खेलपछि खुल्ला रहनेछ । भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बिसीसीआईको प्राबधान अनुसार लिगका सातौ चरणको खेलपछि क्लबहरुले खेलाडी ट्रान्सफरको सुबिधा उपयोग गर्न पाउनेछन् । आज हुने रोयल च्यालेंजर्स बैंगलोर र कोलकत्ता नाइट राइडर्सबीचको खेलपछि टोलीका लागि खेलाडी ट्रान्सफरको विकल्प खुल्ला हुनेछ ।
बिसीसीआईको आब्हानपछि क्लबले आफुलाई आवश्यक पर्ने खेलाडी टोलीमा राख्न पहल गर्नेछन् । यस्तोमा बेञ्चमै सिमित भएका तथा मौका नपाएका खेलाडीलाई पनि राहात मिल्नेछ । आईपीएलको जारी संस्करणमा धेरै खेलाडी बेन्चमै सिमित बनीरहेका छन् । यस्तोमा खेलाडीहरु अर्को क्लबमा ट्रान्सफर हुने संभावना ज्यादा रहेको छ ।
बिसीसीआईको बिधानमा लिगका आधा खेल सकिएपछि फ्रेन्चाइज टिमले अर्को टिमको खेलाडी अनुबन्धन गर्न पाउने विकल्प दिएको छ । जसका सर्तहरुमा ट्रान्सफर हुने खेलाडीले २ भन्दा धेरै खेल नखेलेको हुनुपर्ने तथा सबै टिमले समान ७ खेल खेलिसकेको हुनुपर्ने राखिएको छ ।
१३ औ संस्करणको आईपीएलमा थुप्रै स्टार खेलाडी बेन्चमा सिमित छन् । नेपाली लेगस्पिनर सन्दिप लामिछानेसंगै क्रिस गेल, मुजीब उर रहमान, इमरान ताहिर, जोस हाजलउड, मिचेल मेकक्लेनाघन, क्रिस लियोन, डेल स्टेन, क्रिस मोरिस लगायतका खेलाडीले मौका पाउन सकेका छैनन् । यस्तोमा उनीहरुका लागि पनि अर्को मौका जुर्ने संभावना हुनेछ ।
सन्दिपले के गर्लान ?
आम नेपाली क्रिकेटप्रेमी लेगस्पिनर सन्दिप लामिछानेलाई प्लेईङ सेटमा हेर्न निक्कै प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । करियरकै उत्कृष्ट लयमा रहेका उनी युएईको पिचमा राम्रो बलिङ गर्ने क्षमता समेत राख्छन् । तर दिल्ली क्यापिटल्सले उनलाई सिजनको सातौ चरणसम्म पनि बेञ्चमै सिमित गरेको छ । दिल्लीमा अनुभबी स्पिनरको कमी नभएको कारण उनले मौका पाउन नसकेका हुन् । त्यस्तै टोलीको बिदेशी कोटामा ४ जनामात्र राख्न पाउने प्राबधानका कारण पनि उनलाई टोलीमा स्थान बनाउन मुस्किल परेको छ । यो अवस्थामा सन्दिपलाई कुनै क्लबले लिएर प्लेईङ सेटमा राखोस भन्ने चाहाना आम नेपाली समर्थकको छ । तर त्यो त्यत्ति संभव देखिन्न । दिल्लीबाटै आफ्नो भविश्यलाई विस्तार गरेका सन्दिप मौका नपाएपनि टोलीको साथमा रहने संभावना बलियो छ । अघिल्ला संस्करणमा पनि उनले अन्तिमका केहि खेलमा मात्र मौका पाएकाले पनि उनी त्यसमा विश्वस्त छन् । टोलीका केहि खेलाडी घाईते समेत भएको अवस्थामा बेञ्चलाई बलियो राख्न दिल्लीलाई उनको आवश्यक्ता निक्कै रहन्छ ।
टोलीसंग खासै असन्तुष्ट नरहेकाले पनि उनले मिड ट्रान्सफरको विकल्पमा स्विकृती जनाउने संभावना न्युन रहेको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस् : हैदरावादसंग दिल्लीको लज्जास्पद हार
आईपीएलको प्लेअफ र फाईनलको मिति तय